​Madaxweyne Farmaajo oo gaarey Sacuudiga [Sawirro]
​Madaxweyne Farmaajo oo gaarey Jeddah [Sawirro]
JEDDAH, Sacuudiga - Madaxweynaha Somaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyo wafdigiisa ayaa gaarey galabta magaalada Jeddah, ee dalka Sacuudiga.
Wafdi Madaxweynaha waxaa Garoonka Diyaaradaha kusoo dhaweeyay, Safiirka Sacuudiga u fadhiya Somaaliya, Maxamed Bin Cabdul Fani Qiyaad iyo Mas'uuliyiin kale oo Boqortooyada dalkaasi katirsan.
Booqashada Madaxweyne Farmaajo oo qaadan doonto Mudo labo maalmood, ayaa lagu wadaa inuu Kulamo la qaato Boqor Salman Bin Cabdicasiis, iyo Wiilkiisa, ahna Dhaxal-sugaha iyo Wasiirka Gaashaandhigga dalkaasi, Maxamed Bin Salman.
Eng Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow, Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Federaalka, ayaa sheegay in Safarka Madaxweynaha uu la xiriiro safaradii hore ee February iyo May ee uu ku tagey dalka Sacuudiga.
Arrimaha looga hadli doono Kulanka Farmaajo iyo Boqor Salman, waxaa kamid ah Dhaqaalaha, Amniga iyo Maalgashiga, sida lagu sheegay War Saxaafadeed kasoo baxay Madaxtooyadda Villa Somaaliya.
Diyaarad gaar ah oo Boqor Salman usoo diray, ayuu Madaxweyne Farmaajo ku tagey Jeddah.
Lama oga Ajandooyinka Kulanka Madaxweyne Farmaajo iyo Boqor Salman in uu kamid noqon doono Go'aanki dhex-dhexaadnimada ee dowladda Federaalka Somaaliya ka qaadatey Khilaafka Khaliijka.
Wasiirro uu kamid yahay Yuusuf Garaad Cumar, ayaa ku wehliya Madaxweynaha Safarkiisa Sacuudiga, kaasi oo imaanaya xilli Khilaaf Siyaasadeed xooggan uu ka dhex-taagan yahay dowladiisa iyo mamul goboleedyada, kaasi oo salka ku hayo Xiisadaha Khaliijka carabta.
Warsidaha Garowe Online ayaa 17-ka bishan September soo qoray in Madaxweynaha Somaaliya uu u safrayo dalka Sacuudiga, islamrkaana uu la kulmayo Boqor Salman.
Maxamed Bin Salman oo ku wajahan Masar
Caalamka 03.03.2018. 16:10
Masar ayaa kamid ah dalalka xiriirka u jaray Qadar bishii June ee 2017...
Dhaxal-suge Maxamed oo sameeyay qirasho ku saabsan dilkii Khashoggi
Wararka 26.09.2019. 15:00
Jubba iyo Daallo oo lagu eedeeyay dayacaadda Xujeyda [DAAWO]
Soomaliya 23.08.2018. 14:45
​Madaxweyne Farmaajo oo u safray Sudan [Sawirro]
Soomaliya 04.10.2017. 02:40
Diyaarado marin-habaabiyey Xujeyda oo lala xisaabtamayo
Soomaliya 10.08.2019. 07:56
Guddiga qaban-qaabada Shirka Wada-tashiga Puntland oo la magacaabay 18.02.2020. 15:34
Casharka laga baran karo "fashilka booqashada" Farmaajo ee Hargeysa 18.02.2020. 14:37
DF oo ciidamo geysay Beledxaawo xili Axmed Madoobe kusii jeedo Dhoobley 18.02.2020. 13:29
Biixi oo hadlay booqashada Farmaajo ee Hargeysa iyo kulankii Addis Ababa 18.02.2020. 10:54
DF Soomaaliya oo xukuntay xubno iyo wariye ka tirsanaa Al-Shabaab 18.02.2020. 10:04
Madaxweyne Farmaajo oo "xoojiyey" tuhun laga qabay dowladiisa 18.02.2020. 07:00